Tag: xawaaraha mobilada | Martech Zone
Tag: xawaaraha mobilada
Marwalba mar, waa muhiim inaad dib u eegto istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Dabeecadaha macaamiisha ayaa isbadalaya waqtiga, istaraatiijiyadaha qofka kula tartamaya ayaa is badalaya waqti kadib, iyo aaladaha suuq geynta ee dhijitaalka ah ayaa isbadalaya waqtiga. Guga ayaa halkan jooga, oo hadda waa waqtigii ugu habboonaa ee loogu talagalay noocyada inay dib u cusbooneysiiyaan dadaalkooda suuq-geynta dijitaalka ah. Marka, sidee baayacmushtariyaashu uga takhalusaan qulqulatooyinka istiraatiijiyadooda suuqgeynta? Xogta cusub ee MDG, akhristayaashu waxay ku baran doonaan taatikada duugga ah ee daallan ee tan lagu tuurayo